Ilele ọdịnaya gị Kalinda | Martech Zone
Ilele ọdịnaya gị Kalinda
Wednesday, July 6, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Gingde blọgụ na mgbasa ozi mmekọrịta bụ marathon nke na-ewepụta ọdịnaya bara uru kwa ụbọchị maka ndị na-ege gị ntị. Ebumnuche bụ ịmepụta ikike na ọdịnaya zuru oke nke anyị nwere ndị na - agụ akwụkwọ, ndị na - akwado ya ma ọ bụ ndị na - eso ụzọ mechara bụrụ ndị ahịa. Nke ahụ na-ewe obere oge, oge ụfọdụ, yabụ, ọ dị mkpa ka ị lekwasị anya n'ihe mgbaru ọsọ dị n'ihu. Otu ụzọ ị ga - esi mee nke a bụ site na itinye kalenda ọdịnaya n'ime sistemụ njikwa ọdịnaya gị.
Kalenda ọdịnaya ahụ na-enye gị ohere iji anya nke uche gị hụ ihe posts gị ga - eme n'ọdịnihu ka ị nwee ike ịga n'ihu na - achọ atụmatụ ọdịnaya gị niile. Ngwakọta na nso nso a wepụtara kalenda ọdịnaya dị egwu nke na-enye onye nchịkwa ohere ịnweta echiche zuru oke nke ọdịnaya ahụ - gụnyere ọdịnaya nke onye nchịkwa ga-akwado. Nwere ike ịhụ na anaghị m eme nke ọma na iwepu ọdịnaya ahụ n'ọnwa gara aga!
Ebe m nwere ma a Ngwakọta blog na WordPress blog, M bụ ọchịchọ ịmata ma ọ bụrụ na onye ọ bụla wuru a yiri atụmatụ maka WordPress… na ha nwere! Ọ bụ Kalịnda Nhazi WordPress.
Kalịnda Ederede WordPress na-enyekwa gị ohere ịgbakwunye posts yana ịdọrọ na dobe ha. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye njikwa ọrụ mgbasa ozi na-arụsi ọrụ ike, ịnwere ike ịjupụta kalenda izu gị n'ihu wee nye ndị ọrụ gị ọdịnaya ahụ. Nke a bụ ụzọ dị ukwuu iji hụ na ị na-anapụta ihe nnukwu usoro ị chọrọ!
Tags: Nnyocha Ahịa Primarynnyocha mbụndụmọdụ ngwanrọ
Ọdịnaya Grid v2
Uru ahịa ọdịnaya
Julaị 6, 2011, elekere 7:31 nke ehihie
Ọ dị mma, a na m achọ ụzọ m ga-esi jiri saịtị wordpress mee nke a. Nice webụsaịtị kwa n'ụzọ.